Webtalk FAQ - 💌 WebTK - Ithikithi yakho ukuya WebTalK 🚀 Mema, Hlola, Iindaba kunye nokunye 🔥
Ngaba Webtalk unayo i-cryptocurrency yayo?
Webtalk izakuba neyayo i-cryptocurrency ebizwa ngokuba yi Webtalk Coin. Kwi 2018, Webtalkumsunguli URJ Garbowicz uthe babecwangcisa ukubeka zonke iakhawunti ezinxulumene nabo kwiTekhnoloji yeBlockchain ngeekhontrakthi ezifanelekileyo ukuze zithengiswe kwaye zidluliselwe njengalo naliphi na elinye ishishini. Funda esi sithuba ngolwazi oluthe kratya malunga Webtalk Inkcitho.
Ngaba Webtalk ukwamkela iNyani echanekileyo (i-VR / AR)?
Ngoku ka lo msebenzi, Webtalk izicwangciso zokusebenzisana kunye Uluhlu lweMilingo, inkampani yokuqalisa ekhethekileyo kwiNyathelo elingathandekiyo.
Ngubani osemva Webtalk?
Kuya kuthi nini Webtalk ziguqulelwe ngolwimi lwam?
Loluphi ulwimi olwenzekayo Webtalk Sebenzisa ngaphakathi?
Webtalk usebenzisa i-Angular kunye neNativescript ekupheleni. Ekupheleni komva, Webtalk lithembele kwiClojure, iNode, i-OrientDB, i-NginX, i-Docker, i-AWS, i-Beanstalk, i-S3, i-Salt, i-ElasticSearch ne-Jenkins.
Webtalk Yinkonzo yenethiwekhi yesizukulwana esilandelayo ekunika ulawulo lwasemva kolawulo lwakho:
Inolawulo lobugcisa obuphambili kunye nolawulo lobuqu kwaye inikezela ngenkqubo ye-AfriCPX enenzuzo enkulu kakhulu.
Webtalk, Inc. yinkampani yenethiwekhi yenkonzo esekwe eTampa, eFlorida, eMelika. Yasekwa kwi-2011 ngu-RJ Garbowicz's, i-CEO yangoku, kunye noJeff Catherell, u-Andrew Peret, u-Basit Hussain noJamie Pews. Ngokudibanisa ngaphandle kokubonakala kokulawulwa kweempawu zomntu kunye nezobuqu, Webtalk ijolise ekutshintsheni zombini i-Facebook kunye ne-LinkedIn.
Webtalk yinkampani ye-teknoloji yedatha enkulu, egxile kakhulu kwimigodi yedatha esekwe kulwalamano, ukugcinwa, kunye neetekhnoloji zophando zokunika amandla isizukulwana esilandelayo sonxibelelwano nesoftware yorhwebo.
Usebenzisa inkqubo yokulembela idatha yokulinda patent (i-AKA SocialCRM) Webtalk ikwazile ukuphinda ibuyele kulawulo lonxibelelwano kwi-Intanethi ngamava omsebenzisi angalinganiyo kushishino. Ukwenza udidi olutsha lwemveliso ukulawula oonxibelelwano, unxibelelwano kunye nomxholo ngaphandle komthungo, kokubini nangobungcali.
Webtalk yenjini yokukhangela evumela abasebenzisi ukuba banxibelelane, basebenzisane kwaye bathathe inxaxheba kwimisebenzi ye-e-commerce.
Ngokutsho ukuba Webtalkumsunguli Webtalk RJ Garbowicz: "Webtalk lilizwe elibonakalayo elilawulwa ngumsebenzisi ngamnye kunye nezinto abanomdla kuzo. Inethiwekhi yokulawula ubudlelwane, uthungelwano lolawulo lonxibelelwano, yinethiwekhi yolawulo loqhakamshelwano, yinethiwekhi yolawulo lomxholo… kwaye kungekudala iya kuba yintsebenziswano, ishishini, ukuqesha kunye nolawulo lwenethiwekhi yokuthenga… ”
Webtalk Ngaba liqonga labaphuhlisayo labasomashishini zedijithali.
Webtalk yeyona teknoloji iphazamisayo kakhulu kwi21st Century. I-RJ Garbowicz, 2019 / 10 / 03
Webtalk yenye yezona zinto zikhula ngokukhawuleza zabathengi / abathengisi beshishini kunye nolawulo lolwalamano kwi-intanethi.
Webtalk Ukusombulula iingxaki ezimbini ze-intanethi ezinkulu zehlabathi:
UKUHLAZIYWA konxibelelwano, unxibelelwano kunye nomxholo kunye…
UKUQHELEKA KULawulo malunga nobudlelwane bakho, iindaba, umxholo, imfihlo ...
Webtalk Yinkqubo yedijithali yenkqubo enikezela oku kusebenza ngokulandelayo:
Inethiwekhi yobuqu kunye nobuchule + Blogging
Imiyalezo / Imiyalezo / Iincwadana zeendaba /
I-CRM / Ulawulo loQhagamshelwano
Ulawulo lokuqukethwe / isitoreji sefu
Ukulinganisa / IziPhononongo / iingcebiso
Iimakethe (iimveliso / iinkonzo / umxholo / iinkqubo) (UKUYA KUNYE)
I-eCommerce / iIwebhusayithi ze-DIY (UKUYA KUNYE)
Iziganeko / i-Meetups / i-Finder yomhlobo (UKUYA KUNYE)
Intengiso (i-CPM, i-CPC, i-CPA / i-CPX, i-CPD, i-CPV) + Uhlalutyo + lwee-KPI (IYAZUZA ISONO)
Webtalk liqonga elitsha lentlalontle nelishishini elabelana ngezinto ezifanayo nge-Facebook, LinkedIn kunye neAmazon ngokwahlukeneyo. Inenkqubo edibeneyo yokusebenzisana ebizwa ngokuba yiSocialCPX.
Is Webtalk ngongoma?
Asikholwa Webtalk Isikhalazo: inkampani ngasemva Webtalk isekwe eFlorida, ibhalisiwe ngokusemthethweni eDelaware, kwaye sele ikwishishini iminyaka eyi-8, ityale imali engaphezulu kwe- $ 8M ukusukela ngonyaka ka-2019.
Webtalk ikhuphe iintlawulo zayo zokuqala zekhomishini ngo-Agasti ka-2019, Apha obunye ubungqina bokuhlawulwa kwangaphambili. Ukuza kuthi ga ngoku akukho ngxelo yee-commissions ezingahlawulwanga.
Ngaphezulu, Webtalk Unayo imigaqo yokuziphatha eqinileyo kwaye oluqinileyo mzekelo wo shishino ethi iphinde ibhengeze isikrelemnqa.
Ungajoyina njani Webtalk?
Kulula ukujoyina Webtalk. Konke okudingayo kukuya kwi bhalisa iphepha, faka igama lakho, idilesi ye-imeyile, inombolo yeselula, iphasiwedi, kunye nomhla wokuzalwa. Ukugqiba inkqubo yokubhalisa, kuya kufuneka uqinisekise idilesi ye-imeyile. Ukuze ndi Joyina iqela elilelona WebtalkQiniseka ukuba ungena kwi "STAR" xa ubuze ukuba ngubani omemileyo. Oku kuya kukunika izibonelelo ezininzi ezinjengebhonasi yesabelo seqela lama-50% yeqela.
Ungazijoyina njani Webtalk Stars Iqela?
Kukho iindlela ze-3 zokujoyina i Webtalk Stars Iqela:
Joyina iqela lethu ngqo ngokubhalisa kwi Webtalk Sebenzisa ikhonkco lesimemo okanye ukungena ku- "STAR" xa ubuze ukuba ngubani omemileyo. Ikhonkco lethu lesimemo ephambili webtalk.love kwaye ungabhalisa ngokuthe ngqo ukusuka Iprofayile kaJLK. Ukuqinisekisa ukuba ubhalisa kwiqela elifanelekileyo, jonga ngezantsi kwiphepha elisayinwayo: kuya kufuneka ukhankanye okuncinci:
Ukuba sele ujoyine Webtalk kwelinye iqela, usenokuba "lilungu elamkelweyo" le Webtalk Stars Iqela ngu ukuhlawula umrhumo wexesha elinye ye- $ 20 ukusukela ngoku (umrhumo uza kunyuka ngokuhamba kwexesha). Oko kuyakunika isikhundla sokuba lilungu leenkwenkwezi ezi-2 kunye nezibonelelo ezifanayo zamalungu ethu. Nxibelelana nathi ku
ukuba unomdla wokujoyina iqela lethu ngale ndlela.
Indlela yesithathu yokujoyina iqela lethu, ukuba sele ungene Webtalk, kukuthi yenza into entle ngokwenene, njengokuthengisa "webtalk.love"Ngendlela enobuchule kunye nefanelekileyo, ekhokelela ekunikezeleni ingxelo eyi-10 kuthi (ubungqina obufunekayo). Oko kuya kukunika inqanaba le-2-yelungu le-nyota kunye nazo zonke izibonelelo ezihambelana nazo. Nxibelelana nathi ku
Udidi: iqela Webtalk Stars
Ufumana njani na Webtalk?
Kulula ukufumana umvuzo ngayo Webtalk: konke okudingayo kukumema abasebenzisi abatsha ukuba bajoyine ekusebenziseni Amakhonkco akho okudlulisela. Uya kuthi ke uzuze ikhomishini ye-10% kuyo yonke ingeniso eyenziwe ngokudluliselwa ebomini. Oku kubandakanya:
Iikomishini zeenkonzo zomsebenzi
Iikomishini yesitolo seSwag
Ngapha koko, ukuba ulungele ibhonasi yenqanaba le-5, uyakufumana ikhomishini ye-10% kuyo yonke ingeniso eyenziwe ngokuthumela Amanqanaba e-5 enzulu. Jonga owethu Calculator online Ukuqikelela umvuzo wakho.
Umzekelo ngokudluliselwa kwe200
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, ukuba uku- Webtalk Stars Iqela, unokufumana i-1,000 10 yeedola ngenyanga ukuba umema abantu abayi-XNUMX ukuba Webtalk.
Ufumana njani umvuzo kwi Webtalk Stars Iqela?
The Webtalk Stars Iqela ngu unique ekubeni isabelana nge50% yengeniso yayo namalungu ayo kunye nezibonelelo.
Ukuze ufumane umvuzo kwi Webtalk Stars iqela Kufuneka ufumane ubuncinci beenkwenkwezi ezi-1:
Fumana I-1-inkwenkwezi isimo ngokumema ubuncinci Abasebenzisi be-2 abasebenzayo* ukuya Webtalk (ubungqina obufunekayo); njengelungu le-1-star, ungalindela ukufumana naphi na phakathi kwe- $ 10 kunye ne- $ 100 + ngenyanga ngo-2025 (akukho siqinisekiso). * (Imeko isebenza unyaka ka-2020)
Fumana I-2-inkwenkwezi isimo ngokumema ubuncinci Abasebenzisi be-10 abasebenzayo* ukuya Webtalk (ubungqina obufunekayo); njengelungu le-2-star, ungalindela ukufumana naphi na phakathi kwe- $ 100 kunye ne- $ 1000 + ngenyanga ngo-2025 (akukho siqinisekiso). * (Imeko isebenza unyaka ka-2020)
Fumana I-3-inkwenkwezi isimo ngokumema ubuncinci Abasebenzisi be-50 abasebenzayo* ukuya Webtalk (ubungqina obufunekayo); njengelungu le-3-star, ungalindela ukufumana naphi na phakathi kwe- $ 500 kunye ne- $ 5000 + ngenyanga ngo-2025 (akukho siqinisekiso). * (Imeko isebenza unyaka ka-2020)
Nceda uqaphele ukuba imeko yokufumana nayiphi na yezi zibalo isebenza kuphela kunyaka we-2020. Inani lokudluliselwa ukuze ufumane imeko liya landa ngokuhamba kwexesha. Nangona kunjalo, akuba inqanaba lifunyenwe, ngokuqinisekileyo kunjalo (ngaphandle komonakalo omkhulu owenziwe kwiqela lethu).
Ukuba awukabikho kwi Webtalk Stars Iqela, nceda ubone Ungazijoyina njani Webtalk Stars iqela.
Ngaba Webtalk cwangcisa ukunqoba ihlabathi?
WebtalkEyona njongo iphambili kukwenza i-Virtual Economics, ngokokuseka kwakhe uRJ Garbowicz. Unokufunda okuninzi malunga Webtalk'injongo Apha kwaye Apha.
ikhaya - Webtalk FAQ